27 Dec, 2019 - 00:12	 2019-12-26T18:28:50+00:00 2019-12-27T00:00:13+00:00 0 Views
NDOTSVAGAWO murume ane makore 28 kusvika 38. Ngaave musoja, mupurisa kana driver ane mwana 1 kana 2. Ndine mwana 1, nhamba yangu 0718 043 160.
Tishamwaridzane makadii? Ini ndiri murume ane makore 38 nevana vaviri. Ndinotsvagawo mukadzi ave kuda zvemba asingarware ane makore 20 kusvika 29 anotya Mwari. Handishande, ndoita mabasa emaoko. Ndakambonyerera ndiri kusangana nepfambi dzisingade kuita imba. Anondida ngaandibate pa0719 137 658 asi vakadzi vevanhu musafone henyu uye veMasvingo kwete. Ini ndogara muHarare.
Ndiri murume ane makore 30 nemwana 1 uye ndiri pamushonga. Ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ari pachokwadi ane makore 28 zvichidzika. Andifarira fona pa0776 236 426.
Ndiri kutsvaga musikana anoda zvekuroorwa ari pachokwadi ane makore 18 kusvika 25. Zvizhinji tinozotaura, anenge andifarira anondibata pa0779 152 922.
Makadini veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 23, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 22. Anenge andifarira ngaandibate pa0785 371 525.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 23 ndodawo murume ane makore 25 – 40 anoshanda. Andida ndibate pa0772 493 501.
Ndiri mukomana ane makore 36 ndotsvagawo musikana anodawo zvekuwanikwa ane makore 20 kusvika 30 asiri pamushonga. Nhare yangu 0775 700 162.
Makadii? Ndiri musikana ane makore 23, ndinotsvagawo mukomana ari pachokwadi kwete varume vevanhu. Ari pamushonga kwete nekuti ini handisi. Andifarira ngaandibate pa0775 841 144.
Ndiri murume ane makore 45, ndinotsvagawo mudzimai wekumisa naye imba. Ari pachokwadi, andifarira ngaandibate pa0773 687 182.
Ndiri murume ane makore 33, ndotsvagawo musikana kana mukadzi ane makore 18 – 30 akuda zvemba. Vanoda ndibatei pa0784 339 518, sms kana kufona.
Makadii VeKwayedza? Ndiri murume ane makore 27 ndotsvagawo musikana kana mukadzi ane makore ari pasi peangu. Anoda zvekuvaka musha ndibate pa0785 100 270.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 36, HIV negative uye ndoenda kuchurch. Ndiri kutsvaga musikana akavimbika, anonamata uye ari HIV negative. Ngaave ave kuda kuroorwa ane makore ari pasi pe30. Nhamba dzangu idzi 0715 823 108.
Makadii veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 24, ndinotsvaga mukomana ave kuda zvemba. Nhare yangu 0785 278 308.
Makadii? Ndiri murume wechidiki ane makore 31 nemwana mumwechete. Ndinodawo mukadzi ane mwana kana asina ane makore 19 kusvika 28, anoda zvemba uye anoshanda seni. Zvakawanda totaura, nhare yangu 0714 665 643.
Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 30, ndotsvagawo mudzimai wekuvaka naye musha ane makore 25 zvichidzika. Ngaave asina chirwere, ndobatika pa0773 452 457.
Ndodawo musikana ane makore 18 – 25 asina mwana, handina kumboroora. Ndine makore 35, ngaave anoda chechi asi vaera Moyo kwete. Anoda kugara kumusha kumaruwa anotya Mwari ngaandibate pa0718 502 810.
Makadii veKwayedza? Ndotsvagawo mukadzi wekuroora ane mwana 1 asiri pamushonga. Ndoda ane makore 25 kusvika 35, nhamba dzangu 0786 325 717.
Ndiburitsireiwo tsamba yangu, ndodawo wokuroora ane makore 28 zvichidzika uye ari pachirongwa. Ndine makore 46, nhare yangu 0771 849 893.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 37, ndinotsvagawo mukadzi anoda zveimba ane makore 20 zvichikwira. Ane mwana mumwe kana asina ngaandibate pa0776 193 153.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 41 nevana 3, handina chirwere uye ndoda mukadzi ane makore 30 zvichidzika anofarira zvekumusha. Ini handishandi ndokiya-kiya zvangu ndiri kuChinhoyi. Andifarira nhare yangu 0788 175 219 asi handidi matsotsi. Ndinoda anofarira kunamata chechi dzemweya, zvakawanda tinotaura.
Ndiri mukoma ane makore 26, ndinotsvaga musikana wekudanana naye asiri pamushonga. Andifarira ngaandibate pa0773 988 517.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 22, ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 18 kusvika 20. Andida anondibata pa0716 121 299 asi ndoda asiri pamushonga.
Makasimba here? Ndinodawo murume wekuchengetana naye. Ndiri mukadzi ane makore 35 uye ndine muviri mudiki, vana ndine 3 asi handigari navo. Ndiri kwaMutare kuToronto, handidi anoputa fodya kana kunwa hwahwa uye ndoda anogeza. Nhare yangu 0778 873 557.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 26, ndinotsvagawo musikana akavimbika ari pachokwadi anoda zvemba asati amborara nemurume. Nhare yangu 0714 772 368.
Ndiri mudzimai ane makore 33, ndinotsvagawo murume wekushamwaridzana naye ari serious uye ari HIV negative. Nhare yangu 0773 591 971.
Nhamba dzangu 0785 526 477, ndinoda mhandara yakazara ine makore 18 – 29. Ini ndine makore 35, handina kumboroora. Anoda kugara kumusha achigona hupenyu hwekumaruwa ngaandibate pa0773 705 208.
Makadii vabati vechirongwa? Ndiriwo murume ane makore 47, ndinoshanda muHurumende. Ndinotsvagawo mukadzi ane vana vake uye anoshandawo muHurumende. Anenge andifarira anondibata pa0782 842 367.
Makadiiko veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 27 nevana 2, ndinotsvaka murume anoda zvekuroora chero wezera ripi zvaro. Ndinobatika pa0776 619 472.
Makadii? Ndodawo mudzimai ane makore 30 kusvika 45 wekugarisana. Anoda ngaandibate pa0779 222 234 chero nguva.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana anoda kuroora, ndine makore 30 uye ndinoda mukadzi ari pachokwadi. Runhare rwangu 0777 819 627.
Ndiri murume ane makore 34 ndotsvagawo mukadzi ari pachokwadi chekuda kuita imba yake. Ndoda ane makore 24 – 30. Zvizhinji totaura pa0777 307 218.
Makadii? Ndiri murume ane makore 34 nevana 2. Ndodawo mukadzi ane makore 32 nemwana 1 kana asina, ngaave anoshanda. Nhamba yangu 0773 586 669.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 23 nemwana 1. Ndaodawo murume ane mwana wakewo kana asina. Ngaave nemakore 35 zvichidzika uye ari pamushonga. Anoshanda, anonamata nekutya Mwari ngaandibate pa0713 380 468.
Makadii zvenyu? Ndiri murume anotsvaga mudzimai wekuroora, ndiri pamushonga. Ngaave ari Mukorekore, anondibata pa0772 958 617.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana wemakore 27. Ndinotsvagawo musikana wekuroorana naye ane makore 20 kusvika 27. Andifarira ndibate pa0774 432 150.
Makadini veKwayedza? Ini ndiri murume anoita mabasa emaoko, ndine makore 40 nevana 4. Handisi pamushonga, ndinodawo mukadzi ane makore 25 kusvika 32. Andifarirawo anondibata pa0717 638 390.
Makadii? Ndotsvagawo murume ane makore 49 kusvika 60 ari pachokwadi. Ndobatika pa0776 168 417.
Ndiri mukadzi ane makore 43, ndinotsvagawo murume anoda zvekuroora asingade zvekutamba. Ndine vana 5, vanoda ndibatei pa0775 207 387. Ndiri kuMhangura.
Ndiri kutsvaga mukadzi wekufambidzana naye ane makore 23 – 28 ari pachokwadi. Nhamba dzangu 0773 356 903.
Makadii henyu vechino chirongwa? Ndiri mukomana mutema, ndinotsvagawo musikana mutsvuku kana mushava ane makore 18 kusvika 25. Ngaave ave kuda zveimba, anoda zvekunamata. Asi anaChihera musafone henyu. Vanoda vanondibata pa0715 495 111.
Makadii veKwayedza? Ndakawana wandaida saka vanhu chiregai kundifonera pa0784 255 156.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 23, ndinotsvagawo mukadzi anoda zvekuroorwa. Anoda ngaandibate pa0775 474 421.
Ndiri mukomana ane makore 24, ndotsvagawo musikana ane makore 18 – 21. Ngaandibate pa0772 828 165.
Makadii? Ini ndiri mukadzi ane makore 35 ndotsvakawo murume wekushamwaridza naye ane makore 40 – 45. Anoda anondibata pa0787 582 963 asi ngaabe asina chirwere.
Makadini paTishamwaridzane? Ndiri mukadzi ane makore 26 nemwana 1, ndinotsvagawo murume ane makore 28 kusvika 40 anoenda kubasa. Nhamba dzangu 0772 683 041.
Ndotsvaga mukadzi wekuroora ari pamushonga ane wana 2, ngaawe achigara kuManicaland ane makore 30 – 36. Nhamba yangu iyo 0783 078 834.
Ndinoda mukadzi ane vana vaviri. Ndine makore 39, anoda ngaandibate pa0716 418 227.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 23 ne mwana 1. Ndri pamushonga uye ndotsvagawo murume anoshanda ari pamushonga seni asi asingaratidzike. Nhare yangu 0777 074 372.
Tishamwaridzane makadii? Ndiri mukadzi ane makore 44 uye ndinotsvagawo murume ane makore 50 kusvika 60. Ndiri pamushonga saka ndodawo ari pamushonga seni. Ndoita basa remaoko, zvakawanda tozotaura taonana, ndobatika panhamba dzinoti 0786 018 732.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 25 uye ndinotsvagawo mukadzi asina chirwere ane makore 18 – 23. Anoda ngaandibate pa0784 120 433.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 45, ndinotsvagawo shamwarikadzi yokushamwaridzana nayo ane 35 kana 40. Ndiri muHarare, anodibata pa0773 577 417.
Makadii? Ndiri murume ane makore 40, ndotsvagawo mukadzi wekushamwaridzana naye ane makore 20 kusvika 35. Ndogara kwaMutare, nhamba dzangu 0776 166 475.